Prof, Cali Geedi Oo ka hadlay Go’aanka Ciidamada looga saarayo Muqdisho – XAMAR POST
Prof, Cali Geedi Oo ka hadlay Go’aanka Ciidamada looga saarayo Muqdisho
By Mohamed Abdi On May 6, 2021
Ra’iisal wasaarihii hore Ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geedi ayaa waxa uu ka hadlay Heshiiska Nabadeed ee la gaaray iyadoo uu soo dhaweeyey.
SOO DHAWEYN, BAAQ IYO TALOOYIN
Waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa qodobada heshiiska ay shalay wada gaareen xukummadda JFS iyo mucaaradku, uuna garwadeenka ka yahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku wareejiyey in uu daadihiyo doorashooyin ku qabsooma jawi nabdoon iyo amnigooda.
Ciidamada ka soo baxay goobihii ay ku hor fadhiyeen kulana dagaallamayeen argagisisada Al shabaab ee Muqdisho u yimid dagaalka siyaasadeysan/ iyo ciidamada difaacayey dowladnimada iyo bedqabka shacabka caasimadda Muqdisho waa wada saraakiisheenna iyo askarteenna u dhaartay ilaalinta iyo difaaca dadka, dalka iyo madaxbannaanida Soomaaliya.
Sidaas darteed, waxaan ugu baaqayaa inay dhowraan magaca iyo haybadda ciidamada qalabka sida iyo sharafta iyo karaamada shacabka iyo qaranimada Soomaaliyeed kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda.
Sidoo kale, haddaanu nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaanna inteenna leh hanka madaxtinimada dalka ee xilalka heer kasta (Xildhibaan, Madaxweyne Qaran, RW, Madaxweyne D/Goboleed IWM), waxaan ku talinayaa in aan qalalaase iyo xasillooni darro siyaasadeed iyo mid amniba ka ilaalinno dalkeenna iyo dadkeenna, rabitaankeennana ku saleynno kasbashada kalsoonida shacabka iyo u bandhigidda barnaamijyo siyaasadeed, bulsho iyo dhaqan-dhaqaale oo musharraxu uu ku gaari karo hadafka uu leeyahay.
Ugu dambayn, shacabka Soomaaliyeed waa milkiilaha dowladda waana loo adeegaha rasmiga ah iyo cod iyo canshuur bixiya lagama maarmaanka ah oo la doonayo inuu dastuurka iyo shuruucda dalka kula xisaabtamo adeegayaashiisa/madaxdiisa kala duwan ee hay’adaha qaranka iyo kuwa maamullada gobollada. Shacabka Soomaaliyeedow, dowlanimadu waa nabadda iyo nolosha ee difaaco oo awooddada isticmaal, hana aqbalin qabyaalad, musuqmaasuq, takrifal, caddaalad darro, qof jeclaysi ama necbaysi, haybsooc iyo xagjirmo iwm.
Xukuumada Soomaaliya Yaa Ku Qasbay in Heshiis La Gasho Mucaaradka?